Iindaba -Iqela lethu lithathe inxaxheba ngempumelelo kwimiboniso yesikhumba yase-Hong Kong APLF ngo-2019
Iqela lethu lithathe inxaxheba ngempumelelo Hong Kong APLF umboniso wesikhumba ngo-2019
Iqela lethu labhabha laya eHong Kong ngo-Matshi 12,2019, laqala ukuya kwimiboniso ye-3 yeentsuku ze-APL. Sisikhumba, iMfashini yeeMpahla kunye neZesekeli. Iholo lahlulwe laba yimigangatho emibini, umgangatho wefisrt ngowezinto zeFashoni ekrwada, ezinje ngesikhumba segusha, ufele lweegusha, isikhumba semvu. Umgangatho wesibini ngowezinto zeFashoni. Inkampani yethu ikulo mboniso. ukucheba iiglavu zezikhumba zeegusha, iibhutsi zeentsana, iminqwazi yezikhumba zeegusha, iiragi zezikhumba zeegusha, izikhafu zoboya beegusha kunye nemiqamelo.
Kule miboniso, Sadibana nabathengi bethu abaqhelekileyo sisebenza kunye iminyaka emininzi.Sathetha ngokukhululekileyo malunga nophuhliso lweiglavu zesikhumba segusha kunye nekamva lezinto ezincedisayo zefashoni. Ngelo xesha, Sikwadibana nabathengi abaninzi abatsha, Beza kwifom Japan, South Korea, Australia, USA, Canada kunye namanye amazwe. Babonakalise umdla omkhulu kwiimveliso zethu zezikhumba zeegusha.
Ngokukodwa, iiglavu zethu ezenziwe ngoboya begusha, iminqwazi yefashoni yegusha yegusha, isikhumba semvu esithambileyo kwaye esihlala ixesha elide. Isicwangciso sokuthengwa kwesikhumba segusha esikumgangatho ophakamileyo.Ngoko ke, licebo elifanelekileyo ukufumana izinto zesikhumba kunye nezinto zefashoni ukusuka apha.
Ukusukela ukusekwa kwenkampani ngo-2002, iqela lethu liqhubeka nokulandela iiglavu zezikhumba ezikumgangatho ophezulu kunye neeglavu. Ukubamba ezona ndlela zihamba kakuhle zefashoni.Offcuse, kunye nokuqonda okungcono iimfuno zabathengi ngokuqhubeka nokutshintsha. kuyilo lweodolo kwaye wenze iiglavu ezifanelekileyo zezikhumba zeegusha.Senza kuphela iiglavu zezikhumba zeegusha ezinokuthengisa abathengi. Okuma phezulu, kokukhona uya kubona. Ke, Naluphi na uncedo, Nceda ungathandabuzi ukuba undazise.Sizakwenza konke okusemandleni am ukunceda.Singumntu onobuchule kwizixhobo zeglavu.